Gịnị bụ AirDrop na 5 ndị ​​ọzọ maka gam akporo | Gam akporosis
Gịnị bụ AirDrop na 5 ndị ​​ọzọ maka gam akporo
Ignacio Lopez | 24/03/2021 20:00 | Emelitere ka 26/03/2021 13:09 | Ngwa gam akporo, Nkuzi
AirDrop bụ Apple proprietary ọrụ dị na iOS na macOS na-enye gị ohere ịnyefe faịlụ ọsọ ọsọ na nkasi obi n'etiti iPhone na Mac dakọtara. Ọrụ a bịara na iOS na macOS na 2011, mana ọ dịkwa na gam akporo, ọ bụ ezie, n'ụzọ ezi uche dị na ya, n'okpuru aha ọzọ.
Nhọrọ Google maka gam akporo bu Gam akporo Doo, Usoro nkwukọrịta, amalitekwara na 2011 na Android Ice Cream, nke mere ka o kwe omume ịkekọrịta faịlụ nke ụdị faịlụ ọ bụla na ngwaọrụ ndị ọzọ site na mgbawa NFC. Agbanyeghị, Google hapụrụ mmepe ya iji lekwasị anya na nhọrọ ọhụrụ, ọsọ ọsọ, ntụkwasị obi na nchekwa.
Ọtụtụ bụ ndị ọrụ na-eji smartphone iji nyochaa akaụntụ akụ, nweta netwọkụ mmekọrịta, were foto na vidiyo, zipụ ozi ịntanetị ... Agbanyeghị, ka ka choro komputa maka ụfọdụ ọrụ dị ka ịme akwụkwọ ndabere, edezi vidiyo na / ma ọ bụ foto ...
Ọ bụrụ n ’n’etiti ndị ọrụ ahụ ka na-ejikwa kọmputa, ma ọ bụ na - aga n’ihu ma ọ bụ na - aga n’ihu, anyị ga-egosi gị kacha mma faịlụ nkekọrịta ngwa na android.
1 Soro Dị Nso
1.1 Esi rụọ ọrụ Ekekọrịta na nso
1.2 Otu esi eziga faịlụ na Kekọrịta na Nso
2 Samsung Ndenye Share
2.1 Esi rụọ ọrụ Ndenye Share
2.2 Etu esi ekekọrịta faịlụ na Samsung Quick Share
5 Ziga Ebe ọ bụla
Soro Dị Nso
Dịka m kwuru n'elu, Google hapụrụ Android Beam iji lekwasị anya na usoro nkwukọrịta faịlụ dị oke mkpa: Na-ekere arkekọrịta. N'adịghị ka gam akporo Beam, nke na-eji mgbaaka NFC nke ngwaọrụ, arkekọrịta Na-eji ma njikọ bluetooth nke ngwaọrụ na Wi-Fi.
N'ụzọ dị otú a, ọ dịghị mkpa ka dakọtara ma ngwaọrụ iji nwee ike ịkekọrịta faịlụ na mgbakwunye na inye nnukwu ọsọ ọsọ karịa iji mgbawa NFC.
N'adịghị ka gam akporo Beam, onye ọrụ adịghị mkpa ịhazi ọ bụla oke iji nwee ike iji ọrụ a. N'ebe ahu na Ekekọrịta agbanyụọlaN'ụzọ dị otú a, anyị na-ezere na anyị na-anata arịrịọ nnyefe faịlụ site n'aka onye ọ bụla.
Esi rụọ ọrụ Ekekọrịta na nso
Natively, Share with Nearby na-abughi onye agbanyuru na smartphones niile, iji gbochie anyi inweta ozi site n'aka ndi choro iziga anyi faịlụ.
Iji rụọ ọrụ a, anyị ga-emerịrị usoro ndị m kọwara n'okpuru:
Anyị na-enweta mwube nke ngwaọrụ anyị.
Anyị na-aga menu Google.
N'ime menu Google pịa na Njikọ ngwaọrụ
N'ikpeazụ, pịa Soro Dị Nso.
Ọzọ anyị na-kpọrọ ka tinye aha anyị ama nke mere na ndị chọrọ iziga anyị faịlụ, nwere ike ịchọpụta ya ngwa ngwa. Site na ndabara, "Ekwentị aha mmadụ" ga-egosipụta.
Ihe ikpeazụ anyị ga-eme bụ setịpụrụ visibiliti nke ngwaọrụ anyị. Nke ahụ bụ, onye anyị chọrọ nnweta nke ọdụ anyị ka egosipụtara.
A haziri nhazi nke ụmụ amaala ka naanị ndị anyị nwere ike ịhụ anyị, mana anyị nwere ike gbanwee visibiliti ụfọdụ kọntaktị ma ọ bụ na ngwaọrụ anyị na-anọgide na arụ ọrụ arụ ọrụ ma zoo ka ọ nweghị onye nwere ike ịhụ anyị.
Otu esi eziga faịlụ na Kekọrịta na Nso
Izipu ụdị faịlụ ọ bụla site na Share with Nearby dị mfe site na isoro usoro ndị m na-akọwa n'okpuru:
Nke mbu, anyi abanyeghi na isi ihe oyiyi na vidiyo. Na ihe atụ a, ka kerịta ihe onyonyo na ngwaọrụ ndị ọzọ).
Ozugbo anyị nọ n'onyonyo anyị chọrọ iziga na ngwaọrụ ndị ọzọ site na iji ọrụ Dị Nso, pịa bọtịnụ Share.
Site na nhọrọ dị iche iche egosiri, anyị na-ahọrọ Soro Dị Nso. Ọ bụrụ na egosighi, pịa More iji gosipụta nhọrọ niile dị.
Na-esote, kọntaktị niile a na-ahụ anya nke anyị nwere gburugburu anyị ga-egosipụta. Iji zipu onyogho, anyi kwesiri inwe pịa na nnata.
Onye nnata ahụ ga-enweta ọkwa na-akpọ ha ka ha nabata nnata nke faịlụ ahụ. Mgbe ị nabatara ya, izipu ihe oyiyi a ga-amalite ma a ga-echekwa ya na gallery nke ngwaọrụ ahụ.
Samsung Ndenye Share
Samsung na-enyekwa ndị ọrụ ya nhọrọ nhọrọ nke na-enye gị ohere izipu faịlụ n'etiti ngwaọrụ dị iche iche, ọrụ akpọrọ Ndenye Ekekọrịta. N'adịghị ka AirDrop na Google dị nso, Ndenye Ekekọrịta (naanị dị na Samsung smartphones na mbadamba) dị ọtụtụ, n'ihi na ọ na-enye ohere ịkọrọ a file na otutu ndị mmadụ ọnụ na oke ịgba nke faịlụ ịkọrọ bụ 1 GB.
Na mgbakwunye, ọ na-enyekwa anyị ohere nyefee ọdịnaya n'etiti Samsung smartphone na PC, otu ọrụ Apple na-enye anyị na AirDrop mana amachi na gburugburu ebe obibi ya. Ngwa ngwa na-eji njikọ bluetooth ngwaọrụ na njikọ Wi-Fi, nke ikpeazụ bụ onye ejiri izipu faịlụ ka ibu.
Esi rụọ ọrụ Ndenye Share
Anyị na-aga menu nke mwube site na ọnụ anyị.
Na-esote, pịa na Advanced atụmatụ.
N'ime ọrụ dị elu, anyị na-eme ka ihe ngbanwe ahụ rụọ ọrụ Kpọọ Share.
Ọzọ, anyị ga-enwerịrị ndị mmadụ ga-eso anyị chọrọ ịkọrọ ọdịnaya na visibiliti nke ọrụ a na njedebe ndị gbara anyị gburugburu.
Etu esi ekekọrịta faịlụ na Samsung Quick Share
Ozugbo anyị ahazi Ndenye Share ọrụ na-eso nzọụkwụ zuru ezu na aga na ngalaba, anyị nweta akara obubọk na anyị rụọ ọrụ Ndenye Share ọrụ.
Ọzọ, anyị na-aga faịlụ anyị chọrọ ịkekọrịta, pịa na share bọtịnụ ma anyị họrọ Ndenye Ekekọrịta dị ka usoro mbupu. Na-esote, kọntaktị niile anyị nwere nso ga-egosipụta ma anyị ga-ahọrọ onye nnata.
Ọ bụrụ na onye anyị chọrọ iziga faịlụ ahụ egosighi n'etiti ndi ana-akpo Abịa n ’ikesa oke, anyị kwesịrị inyocha nhọrọ ọhụhụ, ebe ọ bụ na o nwere ike ịbụ n’ihi zoro ezo.
Abụọ na nso na Ndenye Ekekọrịta, anaghị achọ njikọ internetntanetị ma ọ bụ Wi-Fi iji nwee ike ịkekọrịta faịlụ ndị ahụ, ebe ọ bụ na enweghị ndị a, ejiri njikọ Bluetooth.
Otu n'ime ihe ngwọta kachasị mara amara n'ime usoro okike gam akporo iji kesaa faịlụ na ngwaọrụ ndị ọzọ, ma obu gam akporo ma obu iPhone bu AirDroid. Ngwa a, nke na-enyekwa anyị ohere ịkekọrịta faịlụ na kọmputa ndị Windows, macOS ma ọ bụ Linux jikwaa, na-enye anyị ohere ịkekọrịta ụdị ọdịnaya ọ bụla, n'agbanyeghị nha ha bi.
Etu esi ewepu nchekwa na WhatsApp yana ngwa ọrụ ya
N'adịghị ka azịza nke Google na Samsung nyere, ọ dị mkpa iji wụnye ngwa na ngwaọrụ ọ bụla site na ebe anyị chọrọ ịkekọrịta ma ọ bụ nata ọdịnaya. Na mgbakwunye, ngwa ahụ gụnyere mgbasa ozi na usoro ịzụrụ ihe ntanetị iji nwee ike iji ọrụ niile ọ na-enye anyị, nke dị ọtụtụ.
Ihe na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ ị chọghị ịga tinye ngwa ịkekọrịta faịlụ anyị hụrụ na ya Snapdrop, ọrụ ntanetị (ọ bụghị ngwa) nke na-enye anyị ohere ịkekọrịta ọdịnaya n'etiti ekwentị anyị na kọmputa ọ bụrụhaala na ha abụọ jikọọ na otu netwọk Wi-Fi.
Mgbe ị na-abanye na ebe nrụọrụ weebụ a ozugbo ngwaọrụ abụọ ejikọrọ na otu netwọk Wi-Fi, ihe niile ejikọrọ ngwaọrụ ga-egosipụta. Kọrọ ụdị ọ bụla nke faịlụ, anyị dị nwere pịa na ngwaọrụ na nke anyị chọrọ ka iziga faịlụ.
Ọzọ, a ga-egosipụta menu nke nhọrọ nke na-akpọ anyị òkù họrọ ihe oyiyi ma ọ bụ faịlụ site na ngwaọrụ anyị (ọ bụrụ na ị bụ smartphone). Anyị họrọ faịlụ ma gaa n'ihu izipu ya.
Ziga Ebe ọ bụla
Ihe ngwọta ọzọ dị egwu ma a bịa n'izipụ faịlụ n'etiti ngwaọrụ mkpanaka na / ma ọ bụ kọmputa, anyị na-ahụ ya na Ziga Ebe Ọ bụla. Ihe ngosi ọ bụ otu ihe ahụ ka AirDroid na-enye anyị, na-amanye anyị ka anyị wụnye ngwa nke anyị ka anyị nwee ike ịkekọrịta faịlụ, ebe ọ naghị arụ ọrụ site na blu Bluetooth dị ka a ga - asị na azịza Google na Samsung.
Ngwa a dị maka gam akporo na iOS, Amazon Kindle, Windows, macOS, Linux na ọbụna n'ụdị ndọtị maka Chrome, nhọrọ a bụ ihe kachasị atụ aro ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkọkọrịta ọdịnaya n'otu kọmputa ma ọ bụ karịa.
Zipu Ebe obula Ebe odi maka nke gi budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa iji nweta ọtụtụ uru na ya. N'adịghị ka ngwa ndị ọzọ, ngwa ahụ sitere na interface pụrụ iche maka mbadamba.
Ziga ebe ọ bụla (Njikwa faili)
Developer: Nweta Inc.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Gịnị bụ AirDrop na 5 ndị ​​ọzọ maka gam akporo
6zọ ndị ọzọ kachasị mma nke XNUMX maka n'efu na nzuzo karịa